Chitatu, December 13, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ini handina kana tsitsi neVerizon.
Pakutanga gore rino ndakatanga account neVerizon uye kambani yangu yakandidzosera mari yekutenga yemhando 6700 PDA foni. Chikamu chechikonzero nei ndakatenga iyi foni kwaive kubatanidza laptop yangu uye foni kuburikidza neUSB yekuwana Internet pandanga ndiri munzira. Ndakabvunza kana foni yaigona kudaro, vakati hongu. Nekudaro, ivo vakasiya chokwadi chekuti chaida imwe yemari yemubhadharo pamusoro pepamusoro pekushandisa kwandisingagumi internet.
Iye zvino ndakabatirirwa nechibvumirano uye ini ndichine imwe account kuburikidza neimwe inotakura yekuwana Internet.
Per Verizon.com: Chinangwa chedu ndechekuve chiratidzo chinoremekedzwa kwazvo mukutaurirana nekuita uye nekuchengeta zvipikirwa kune vatengi vedu, nharaunda dzedu, vagovani vedu, uye vashandi vedu. Kuzvipira kweVerizon uye Maitiro, ayo anoonekwa pabutiro remukati reMitemo Yedu yeKufambisa, inosimbisa izvi zvisungo.
Ummm… chinangwa chakanaka kuva nacho, asi handina chokwadi chekuti ichokwadi dzako chinangwa. Heano mumwe muenzaniso unosuruvarisa wenyaya yeVerizon:
Zvinonyanya kurwadza kuteerera iyi yese foni. Zvichida kana Verizon akamira kuyedza nickel uye dime (kana 0.002 cents) isu, hatingave vatengi vasina kugutsikana vakadaro.
Wadii kungo bvisa Code yeKufambisa kubva papeji rako rekumba, Verizon? Ingori nzvimbo yakatambiswa!
Tags: verizonverizon kilobyte kushandiswaverizon math
adCenter yeAdsense… izvi hazvigone kunge zvakanaka
Del.icio.us Plug-in yeFirefox
Zvita 13, 2006 na11: 03 PM
Ndinofunga ndaida kuchema vese vari vaviri! Asi kwete yeVerizon. 🙂
Zvita 13, 2006 na10: 40 PM
Wow, ini ndakateerera iyo yose .002 masendi hurukuro uye zvainyanya kurwadza. Ini ndaida kuchema mukomana.
Zvita 16, 2006 na6: 54 PM
Anofanira kunge aive akakwirira kuti atende kuti verizon yaizobhadharisa .002 masenti (zvakapetwa ka1000 zvakapetwa pasi pechuru chimwe chete) pa kilobyte yakashandiswa. Izvo zvaive pachena typo kana chimwe chinhu.lol. Handikwanise kutenda kuti arikuyedza kuwana chikwereti achishandisa iyo .1 cents scheme. Kune rimwe divi, vamiririri vakapusa havasi kumupikisa pahwaro hwekupokana kwangu. Ivo bundu .002 madhora uye .002 masendi mudengu rimwechete.lol.